माधव नेपालको चौतर्फी आलोचना, यतिसम्म भनियो « Ok Janata Newsportal
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा दोस्रो पल्ट पुनःस्थापना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकको कार्यसूची विगतका निर्णयको समीक्षा गर्ने थियो ।
संसदीय समितिहरू विषयगत हुने भएकाले मुलतः यस्ता समितिमा विषयवस्तु केन्द्रित धारणा राखिन्छ । समितिका सदस्यहरू राजनीतिक पार्टीमार्फत जनप्रतिधि बनेर आएकाले राजनीतिबाट टाढा नहुने भए पनि उनीहरूले पनि आफूलाई विषय केन्द्रित गर्छन् ।
उनले आफ्नो भनाइ राख्नेक्रममा शुरूमै संसद पुनःस्थापित भएकोमा आफूहरूको हृदय गदगद भएको भन्दै त्यसमा भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यावाद थिए । यसबाट संसद संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा भएको र मुलुकको राजनीतिक स्थात्विको निम्तिमा एक पाइल अघि बढिएको टिप्पणी उनले गरे । नेता नेपालको यही भनाइबाटै विषयगत समितिमा राजनीतिक विषयको प्रवेश भयो ।
एमालेको संस्थापन पक्षका सांसद नारदमुनी रानाले नेपाल लक्षित गर्दै राजनीतिक टिप्पणी नै गरे । अहिलेको सरकार र संसद जनताले नभइ सर्वोच्चले बनाइदिएको भन्दै नेता नेपालप्रति खिसिट्युरी गर्ने भावमा उनी प्रस्तुत भए ।
त्यसपछि नेपाल पक्षकै सांसद दीपकप्रकाश भट्टले उनलाई ‘प्रतिगमनको मतियार’ भन्दै समितिमा बस्ने अधिकार नभएको बताए। त्यसपछि माधव नेपाल आक्रोशित हुँदै रानाप्रति कड्किए– प्रतिगमनको मतियार बन्ने, राजीनामा दिनुस्, निस्किनुस् ।
सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भने समिति राजनीतिक विवाद गर्ने थलो नभएको भन्दै विषयबस्तुमा केन्द्रित हुन भन्दै विवाद मत्थर पार्ने कोसिस गरिन् ।
माधव नेपाल : संसद पुनःस्थापित भएकोमा हाम्रो हृदय गदगद भएको छ । त्यसमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नु भएकोमा, साहसपूर्ण भूमिका खेल्नु भएकोमा म मान्य सदस्यहरूलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु । यो कदमले प्रतिनिधिसभालाई जोगाएको छ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेको छ । न्यायपालिका जोगाएको छ । कार्यपालिका जोगाएको छ । न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मानमा अभिवृद्धि गरेको छ ।
नादरमुनि राना ः (माधव नेपालतिर संकेत गर्दै) केपी ओलीले विश्वासको मत लिने बेला कहाँ थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनःस्थापना भएको छ । यो संसदलाई जनताले ल्याएको होइन, सर्वोच्चले फर्काइदिएको हो । अहिलेको सरकार पनि सर्वोच्चले बनाइदिएको हो । सरकार र संसद दुवै सर्वोच्चले बनाइदिएको कुरामा कुनै दुई मत छैन । दुवैलाई जनताले ल्याएका होइनन् ।
दीपकप्रकाश भट्ट ः ‘प्रतिगमनका मतियार’ तपाईंलाई यो समितिमा बस्ने अधिकार छैन्, बाहिर जानुहोस् । प्रतिगमनका मतियारहर”ले, संविधानकाविरुद्ध जानेहर”ले यहाँ बोल्ने अधिकार छैन ।
राना ः मलाई किन खबर गरेको ? मलाई खबर किन गरेको बैठकमा आउनुस् भनेर ?
नेपाल ः प्रतिगमनको मतियार बन्ने, राजीनमा दिनुस्, निस्किनुस् ।
पवित्रा निरौला खरेल ः (सबैलाई रोक्ने प्रयास गर्दै) मान्यज्यूहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, तपाईं विषयवस्तुमा बोल्नुहोस् ।
दिव्यमणि राजभण्डारी ः संविधानविरुद्ध बोल्ने ? (टेबुल ठटाउँदै ) यो सरकार अदालतले बनाएको होइन । जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको सरकारलाई अदालतले बनाएको भन्ने ?
खरेलः मान्यज्यु शान्त हुनुहोस् ।
भट्ट ः पार्टीभित्रको अन्तरविरोध संसदीय समितिमा किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
खरेल ः मान्यज्यूहरू राजनीति आफ्नो पार्टीमा गर्नुहोस् । यो समितिको बैठक हो । समितिको बैठकले निर्णय गरेका विषयको समीक्षाको बैठक हो । यहाँ पार्टीको छलफल होइन । पार्टीको छलफल अन्तै गर्नुहोस् ।